Faallo: Xassuusaha saaxiibkay marxuum Axmed Saalax Xasan (AKHRISO) – Soomaali 24 Media Network
Waxaan maanta fursad u heley inaan Bbcsomali siiyo warbixin gaaban oo ku saabsan aqoonta aan u lahaa marxuumka, waxaanse jeclaystay inaan shakhsiyadiisii iyo xassuusaha aan ka hayo idin la wadaago.
Siduu ii sheegey wuxuu Soomaaliya ka tagay 2003, magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika ayuu ganacsi ka bilaabay, wuxuu ahaa xoogmaal Ilaa uu markii dambe ku guulaystay inuu yeesho ganacsi uu isagu leeyahay.
2015 markii xenophobiyada iyo weerarada ajaanib naceybka ah ka dilaaceen Koonfur Afrika wuxuu go’aansaday inuu raadsado nolol ammaan dhaanta midda cabsida leh.
Dhawr jeer ayaa la dhacay, la weeraray, wuxuuna ka badbaaday isku dayo dil.
Axmed wuxuu ugu dambeyn maray dhabbo adag, wuxuu ka degay Brazil, lug iyo tahriib dhuumaalaysi ah oo uu ku maray 12 waddan kadib, wuxuu iska dhiibay xadka Mexico iyo Maraykanka, gaar ahaanna gobolka California.
Isagoo sannad iyo dhawr bilood xidhan ayaannu ku kulannay Gardsden, Alabama, halkaas ayaannu laba Ramadaan ku wada soonnay.
Axmed wuxuu ahaa nin iimaan badan, degan, farxaana oo sheeko xariira,wuxuu lahaa dhoola caddeyn wanaagsan iyo qalbi kalgacalku biyo dhigay.
Diinta aad buu ugu wacnaa, waxaan xassuustaa in goob barxada oo lagu ciyaari jiray kubadda koleyga, islamarkaana aannu ku tukan jirnay salaadaha ay makhrib noo diideen maxaabiis aan islaam ahayn.
Galabtaa is afgaran waa maxaabiista dhexmaray waxaa loo kala baxay gaalo iyo muslim, Axmed oo arrinka hormood nooga ahaa dhankayaga, ayaa fiidkii lagu weeraray qol uu seexan jiray oo ay uu la degenaa Mohamed Ahmed Kilix oo maanta Muqdisho kusoo aasay.
Gurmad ay soomaalidii sameeyeen ayaa keentay in digaandigaha laga dhigo qolyihii weerarka soo qaaday, laba maalmood oo bandow ah ayaa arrintaa darteed xabsiga loo galiyay, ugu danbeyna waxay noqotay in muslimiinta aad loo tixgeliyo.
Axmed wuxuu ahaa nin awlaad jecel iyo aabbe naxariis badan, inantiisa curada ah ayuu sawirkeeda haysan jiray, wuxuu iiga sheekeyn jiray sida uu u jecelyahay, dhawr jeer ayuu iga codsaday inaan suugaan ugu sameeyo( Ilaahay se ima waafajin waanu istaahilay).
Axmed aad buu u dal jeclaa una dad jeclaa, duruufaha iyo dagaallada uu ku naf waayay ayunbuu uga maqnaa ciidda hooyo, maadaama aannaan haysan internet toosa, waxaannu ku kala qoranay telefoonnada buugaag.
Waxaan ku kala tagnay in aannu soo wada xidhiidhno mar kasta iyo meel kasta oo aannu joogno, ( Facebuuga igu soo darso Markaad baxdo, Coverka calanka Soomaaliya ahaa ii saaran buu igu yidhi maalmihii la celinayay) run baanay ahayd oo waannu is helnay.
Axmed wuxuu ku ammaannaa in dhalinyaradii Soomaalida ahayd ee ka yimid gobolada dalka, markii Muqdisho la geeyey habeen badh inuu gurigooda geeyey oo uu gacanta ku hayay.
Walaalayaal muhiimaddu maaha, muxuu u dhintay Axmed iyo ma nimankii 17500$ siistay ayaa ka masuula? MAYA, halkaasay ka qornayd ajashiisu inay ku dhamaato.
Haddii la celin lahaa iyo haddii kale ba maalintiisii ma dhaafeen. Waxayse su’aashu tahay; danta dalka iyo dadka Soomaaliyeed ma waxay ahayd in isaga iyo inta lamidka ah la celiyo, la hanjabiyo islamarkaana halista loo dhaweeyo? Mise waxay ahayd in loo fududeeyo in uu nolol ka samaysto halkaa si uu debero naftiisa, u biilo reerkiisa islamarkaana u damaanad qaado nolosha carruurtiisa?
Waddankeennu malaha wax la dhoofiyo oo dunida loo iib geeyo, carruurteennu waxay wax ku bartaan labada boqol ee bannaanka laga diro, saw ma wacnayn in sidaa loo fahmo? Haddiise la celiyay isaga iyo inta lamidka ah meedey qoraalladii lagu sheegayay in la damaanad qaadayo ammaanka isaga iyo muwaadiniinta kale ba? Maxaa dadka been loogu sheegayaa? Cawad carruurtiisa saw kan Pakistan u dira maaha? Mee Thaabitkii lahaa annagaa wadanka dacal Ilaa dacal ammaankiisa gacanta ku haynee keena aan ceshanee. Muxuu u joogi waayay Soomaaliya hadduu nabad ku hayo?
Previous Faallo 10 jeer oo ahayd inuu is casilo Raysal wasaare Xasan Cali Kheyre (AKHRISO)